खाने, पिउने र खाना पकाउने - खाना हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ
तथापि भोजनको एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु बहुतायतको प्रश्न हो
खाना र स्वास्थ्य
खाना, पेय र पकाउने बारेमा थप पृष्ठहरू
भोजन वास्तव मा एक सरल मुद्दा मा एक छ, तपाईं कम से कम मतलब हुन सक्छ। यद्यपि, यो विषय साँच्चिकै जटिल छ र यसलाई कति छोटो घटकहरू निम्न लाइनहरू द्वारा सूचित गरिन्छन्। सम्भवतः तपाईंले पहिले नै पढ्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो समयमा भोजनको बारेमा धेरै सुन्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा जानकारीको बाढीले हामीलाई लगभग दैनिक आउँछ। तर कसले छक्क परेको छ?
भोजन - खाना खाई भन्दा बढी
आखिर, भोजनको विषय हाम्रो सम्पूर्ण जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, निस्सन्देह, किनकि हामी केवल खाना खाई बिना मृत्यु को बिरुद्ध हुनेछौं। तर भोजन को विषय सिर्फ घातक भोजन भन्दा धेरै अधिक छ र यो वास्तव मा यो विविधता खोज्न को लागी हो।
खाने, पिउने र खाना पकाउने
एक्लै खाना विकल्पहरूको विशाल चयन अद्भुत छ। सबै प्रकारका मासु र माछाहरू माछाहरु र सब्जिहरु लाई दुनिया भर बाट शुरू गर्दै। विभिन्न मसला र जडी बूटी बिर्सन नदिनुहोस्। यस सूची लामो समयको लागि जारी राख्न सकिन्छ।
तैपनि तयारी को मार्ग संग, हामीसँग कुनै सीमा छैन। चाहे विस्तृत मेनू वा सरल भोजन तपाईंसँग छ। बुकस्टोरमा, अलमारियों को शाब्दिक रूप देखि पढने को किताबहरु संग ओभरफ्लो र अधिक देखि अधिक जोड दिए।
कोचाप पनि बढ्दो लोकप्रियताको आनन्द उठाउँदैछन्। तर तपाईंको आफ्नै रचनात्मकता पनि पाक मा समावेश हुन सक्छ, यसैले आफ्नो स्वाद अनुसार, स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ।
भोजन को धेरै वर्ष हरेक वर्ष फेंकिएको छ। यो विरोध गर्न, यो सायद भोजन र हाम्रो भोजन संग व्यवहार गर्ने एक सचेत तरिका जिउन महत्त्वपूर्ण छ। यहां सम्म कि बायाँबाट पनि कि हामी अझै घरमा फ्रिजमा छौँ, उदाहरणका लागि, स्वादिष्ट व्यञ्जनहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ र खाना खानुपर्छ बिनमा फकाइएको छ।
बिस्तर मा नाश्ता
चाहे हामी आफ्नो चार पर्खालहरुमा काम पछि पकाउँदछौं वा सप्ताहांतमा हाम्रो मनपर्ने रेस्टुरेन्टको भ्रमण गरौं, खाना खाने भन्दा बढी धेरै हुन सक्छ, यो सबै इन्द्रको लागि पर्व हुनुपर्छ। तर बिगजको विविधता र स्वादले हामी खाना पकाएर अनुभव गर्न सक्छौं र त्यसपछि खान्छ यो अद्भुत छ।
खाने पनि सामाजिक सम्पर्क खेती गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि यो कति राम्रो छ, उदाहरणका लागि, जब तपाइँ साथीहरू सँगसँगै खाना बनाउनुहुन्छ, एकसाथ हान्नुहोस्, नयाँ व्यञ्जनहरू सँगसँगै प्रयास गर्नुहोस् र त्यसपछि शान्त राउन्डमा मनमनै मेनुको आनन्द लिनुहोस्। वा एक राम्रो व्यक्तिको साथ रेस्टुरेन्टमा जानुहोस् जुन जानबूझेर खाने समय लाग्छ। र पनि एक वा अर्को जोडा खाना पकाउन आउनु भएको छ ...
यी सुन्दर पृष्ठहरूको अलावा, तथापि, भोजनको विषय पनि केहि खतरनाक हुन सक्छ। खास गरी यदि तपाईं धेरै धेरै र धेरै अचम्म खान्छौं। मोटाई र जटिल जटिलताहरू त्यसपछि घातक हुन सक्छ। यो स्वास्थ्य-सजग आहारमा ध्यान दिन सबै महत्त्वपूर्ण छ।
रातको मध्यमा कारागार आक्रमण अस्वस्थ छन्
यद्यपि टन पसलहरूले हामीलाई डिपार्टमेन्ट स्टोरको अलमारिकालाई स्वागत गर्ने टनहरू मिठो हुन सक्दछन्, हामी जान्नुपर्छ कि यस प्रकारका खानाहरू प्रायः प्रयोग गर्न सकिन्छ। उस्तै अनौठो फास्ट फूड सौदों मा लागू हुन्छ जुन मशरूम जस्तै चिसो हुन्छ।
तर यो यो विपणन रणनीति हो जुन धेरै मानिसहरूको लागि अपील गर्दछ, आजकल संसारको तनावमा प्रायः जीवनको तनाव कारक अत्यन्त उच्च हुन्छ र प्रायः आफैले पकाउने समयको कमी एक महत्वपूर्ण कारक हो। त्यहाँ आफ्नो आहारमा कुनै पनि ठाउँ छैन त्यसैले जब तपाईं आफैं भान्सामा बस्नु हुन्छ ताजा सामग्रीको साथ तपाईंको भोजन तयार पार्न सक्रिय छ।
स्वस्थ रहनुहोस् र वृद्ध उमेर सम्म पश्चाताप गर, जुन यो चाहँदैन? एक सन्तुलित र स्वस्थ आहार महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अनगिनत पोषण सुझावहरू र यो विषयमा सल्लाहले यस लक्ष्यलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्न सक्छ।
कुनै पनि व्यक्ति जसले आफ्नो आहारलाई अस्वस्थ स्वस्थबाट परिवर्तन गर्न कठिनाइ गरेको छ, प्रशिक्षित पोषण विशेषज्ञहरूबाट पनि मद्दत पाउन सक्दछ र स्वास्थ्य हरेक अवस्थामा आभारी हुनेछ। यद्यपि, यदि तपाईंसँग गंभीर पोषण समस्याहरू छन् भने, तपाइँले निश्चित रूपमा चिकित्सा सहायता खोज्नु पर्छ, अन्यथा तपाईंको स्वास्थ्यमा अपरिवर्तनीय क्षति परिणाम हुन सक्छ।
खाना राम्ररी भण्डारण गर्नुहोस्
प्रोटीन रोटी बनाउनुहोस्
तस्विरहरु संग घरेलू मसलाहरु
ग्रिल र सीजन ठीक छ
नरिवल तेलको साथ राम्रो कुकुर
हर्ब बगैचा र जंगली फूलहरूसँग पकाउने
सैफन - संसारमा सबैभन्दा महान् मसला
आफैलाई पंच गर्नुहोस्
एक स्वस्थ विकल्पको रूपमा किन्डेटे
पाक कला र व्यञ्जनहरु
बेक्ड स्याउ र कद्दी muffins
आलु सलाद व्यञ्जनहरु
पास्ता सलाद नुस्खा
रेग्टोलाई पूर्ण रूपमा तयार पार्नुहोस्
आफैलाई रोटी बनाउनुहोस्
दैनिक जीवनमा 10 वसा-सुरक्षित सुझावहरू
मसाले - स्थानीय जडीबुटी खाना खाने बेला
रंग पकाउने पृष्ठ